लक्ष्मी बैंकको ३ नयाँ शाखा विस्तार
काठमाण्डौ । आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा लक्ष्मी बैंकले थप ३ नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ। लक्ष्मी बैंकले ललितपुरको ललितपुर–८ पाटन सुन्धारा, काठमाण्डौको गोकर्णेश्वर–७ मूलपानी र काठमाण्डौको टोखा–३ टोखामा शाखा विस्तार गरेको हो। यी ३ नयाँ शाखाको स्थापनासँगै लक्ष्मी बैंकको सञ्जाल ४८ जिल्लामा १२४ शाखा, ७ एक्स्टेन्सन...
लक्ष्मी बैंक एडीबीद्वारा ‘अग्रणी साझेदार बैंक’ का रुपमा सम्मानित
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले एसियाली विकास बैंकको ट्रेड एन्ड सप्लाई चेन फाइनान्स प्रोग्रामबाट सन् २०२० का लागि ‘नेपालको अग्रणी साझेदार बैंक’ का रुपमा सम्मान प्राप्त गरेको छ। ट्रेड एन्ड सप्लाई चेन फाइनान्स प्रोग्रामसँग २०१९ जुलाई १ देखि २०२० जुन ३० को अवधिमा नेपालबाट सर्वाधिक कारोबार गरेबापत हालै सम्पन्न एक भर्चुअल कार्यक्रमका...
काठमाण्डौ । स्विस सरकार विकास सहयोग (एसडीसी) को सहयोगमा वान टु वाचले एनएमबी बैंक र लक्ष्मी बैंकसँग साझेदारी गरी कोभिड–१९ एमएसएमई कोषको घोषणा गरेको छ। यो कोषको मूल उद्देश्य कोभिड–१९ बाट प्रभावित लद्यु, साना तथा मझौला व्यावसायहरुलाई सहयोग दिने रहेको छ। यो कोषबाट व्यवसायहरुलाई छोटो अवधिका लागि कर्जा प्रदान गर्नुका साथै व्यवसायअनुकूल...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रमण नेपाल नियुक्त भएका छन्। बैंकको सञ्चालक समितिको आज सम्पन्न बैठकले नेपाललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। नवनियुक्त अध्यक्ष नेपालले आजै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) बाट अध्यक्ष पदको सपथ लिएका छ�...
कोरोना कहरबीच लक्ष्मी बैंकले घटायो खराब कर्जा, ११% बढी लाभांश बाँड्नसक्ने
काठमाण्डौ । कोरोना कहरका बीच लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट आफ्ना सेयरधनीलाई ११.४८ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्नसक्ने क्षमता बनाएको छ । कोरोना संकटका कारण थपिएका कतिपय नियामकीय व्यवस्था र प्रोभिजनमा ठूलो नाफा रकम छुट्याउनु परेको अवस्थामा समेत बैंकले औसत प्रगति गरेको देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा यो बैंकको वितरणयोग्य...
काठमाण्डौ । आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले आफ्नो छैटौँ र सातौँ एक्स्टेन्सन काउन्टर दोलखा जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकले छैटौँ एक्स्टेन्सन काउन्टर दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं. ३ जाफेमा र सातौँ एक्स्टेन्सन काउन्टर कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नं. ८ सुनखानीमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। यी दुवै...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो ५औँैँ एक्स्टेन्सन काउण्टर राजविराजको जिल्ला अदालतमा संचालनमा ल्याएकोे छ । यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो नयाँ...
काठमाण्डौ । कोभिड–१९ रोकथामका लागि अपनाइएको लकडाउनका कारण घरबाट काम गर्नुपर्ने नयाँ वातावरणको सिर्जना भएको छ । हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाइएको परिणामस्वरुप शैक्षिक संस्था तथा कार्यालयहरु बन्द भएको स्थितिमा विद्यालय तथा कलेजहरुमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने तथा व्यवसायी तथा कर्मचारीहरुले घरबाटै काम गर्ने अवधारणाको विकास भएको छ । यसै...
काठमाण्डौ । विश्व महामारी कोरोनाभाइरसको संकटका कारण लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक देखिएको छ। तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ४१ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक देखिएको हो। बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। यो खुद...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १२१ औँ शाखा काभ्रेको पनौतीमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो शाखाका साथ लक्ष्मी बैंकको सञ्जाल ४८...
लक्ष्मी बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको झन्डै ९० लाख कित्ता बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा बुधबार सूचीकृत भएको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गरेको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरेको हो। बैंकले ८९ लाख २० हजार ५०८.६४ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत गरेको छ। ...
लक्ष्मी बैंकका अध्यक्षले गभर्नरसँग सपथ लिए
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष सुशिल घिमिरेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिमा संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने घिमिरेलाई बैंकको सञ्चालक समितिले अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । सपथ कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र...